Dr. Tint Swe's Writings: Azoospermia သုက်ပိုးမရှိခြင်း
၁။ မင်္ဂလာပါဆရာ ဟိုတခါဆရာနဲ့တိုင်ဖူးပါတယ်။ သမီးတို့နှစ်ယောက်လုံး ogနဲ့သွားပြခဲ့ပါတယ်ဆရာ။ အဲ့ဒါသမီးကို omigea3နဲ့ ဖောလစ်အက်စစ် သောက်ဖို့ညွှန်ပါတယ်။ အမျိုးသားကိုတော့ စစ်ခိုင်းတာရှိပါတယ်ဆရာ။ အဲ့အဖြေရပါတယ်ဆရာ။ အဲ့ဒါဘယ်လိုအဖြေဆိုတာပြောပြပေးပါနော်ဆရာ။ နောက်လမှ ပြန်ပြရမှာမို့ သမီးတို့ သိချင်နေလို့ပါဆရာ။
၂။ ဆရာကျွန်မအကူညီတောင်းပါရစေ။ ကျွန်မ ကလေးအရမ်းလိုချင်နေတာပါ။ ကျွန်မအိမ်ထောင်သက်တမ်းငါးနှစ်ရှိပါပြီ။ ဆရာပေါင်းလည်း စုံနေပါပြီ။ ဒါပေမဲ့ အဆင်မပြေပါဘူး။ ဆရာတွေကပြောတာတော့ ကျမယောက်ကျားရဲ့ သုက်ရည်ထဲမှာ သုက်ကောင်တကောင်မှမပါဘူးလို့ပြောပါတယ်။ အဲဒါနည်းလမ်းလေးရှိရင်။ ကူညီပါအုန်း။
- Astenospermia = သုက်ပိုးတွေလှုပ်ရှားမှုမကောင်းတာ။ အဲတာကြောင့် မမျိုးဥဆီရောက်အောက်မသွားနိုင်လို့ ကိုယ်ဝန်မရစေနိုင်ဘူး။
- Necrospermia (Necrozoospermia) = သုက်ပိုးတွေက မလှုပ်ရှားနိုင်တာ ဒါမှမဟုတ် မရှင်သန်တာ။
- Oligozoospermia = သုက်ပိုးသိပ်သည်းမှုနည်းတာ။
- Azoospermia = သုက်ရည်ထဲမှာ သုက်ပိုးကစမ်းတွေလောက်အောင်အထိ မများတာ။
• သုက်ပိုးထုတ်လုပ်မှု ချို့ယွင်းချက်နဲ့ လမ်းပိတ်ဆို့နေတာ တခုခုဖြစ်မယ်။
ဘာလို့ သုက်ရည်ထဲမှာ သုက်ပိုးမပါသလဲ
3. Genetic infertility due to abnormal chromosomes (karyotype) မျိုးဗီဇချို့ယွင်းခြင်း၊
5. Hypothalamic/pituitary tumor ဦးနှောက်အကျိတ်၊
9. Pituitary suppression, drug induced (anabolic steroids, alcohol, glucocorticoids) ဦးနှောက်ထဲက ဟော်မုန်းတွေထုတ်ပေးတဲ့ဆေးတွေပေးနေခြင်း၊
16. Pesticide/toxin exposure ရေနွေးချိုးခြင်းအပါအဝင် အဆိပ်အတောက်နဲ့ထိတွေ့မိထားခြင်း၊
19. Ejaculatory duct obstruction သုက်ထုတ်ပြွန်ပိတ်နေခြင်း၊
• Epididymis (အပီဒီဒါးမစ်စ်) အစိအထက်နေရာမှာ ပိတ်နေသူ ၆၅% ရှိတယ်။
အနုစိတ်ခွဲစိတ်မှု နဲ့ ပိတ်နေတဲ့နေရာကို တိတိကျကျသိနိုင်ပြီး အနုစိတ်ခွဲစိတ်မှု နဲ့ ပြုပြင်ပေးနိုင်တယ်။
ပိတ်ဆို့ခြင်းမရှိသူကို Kallman syndrome နဲ့ hyperprolactinemia တွေဆိုရင် ကုသပေးလို့ရတယ်။ သုက်ပိုးကို ကျားအစိကနေ ထုတ်ယူမယ်။ IVF နဲ့ ICSI နည်းတွေနဲ့ ကလေးရအောင်ကြိုးစားနိုင်တယ်။ ခက်ခဲတာက ၅ဝ% သာ သုက်ပိုးထုတ်ယူလို့ရတယ်။ ကျားအစိအရွယ်အစား၊ serum FSH level နဲ့ biopsy reading တွေကြည့်ပြီး အောင်မြင်နိုင်မှုကို မှန်းဘို့ခက်တာဖြစ်တယ်။
Azoospermia သုက်ပိုးမရှိခြင်း http://doctortintswe.blogspot.com/2015/01/azoospermia.htmlhttp://doctortintswe.blogspot.com/2015/01/azoospermia.html
Anejaculation သုက်မထွက်ခြင်း http://doctortintswe.blogspot.com/2015/04/anejaculation.html